Horonantsary: ​​Social Smackdown amin'ny Search | Martech Zone
Talata, Septambra 10, 2013 Talata, Septambra 10, 2013 Douglas Karr
Heveriko fa MDG Advertising niezaka ny sasany taminay hanipy gasket rehefa namaky ny lohatenin'ity horonantsary infographic izay natambatra, Social Smackdown Search vs Search: Adin'ny Titans Marketing amin'ny Internet. Saingy, indrisy, tonga saina izy ireo tamin'ny faran'ny horonantsary.
Rehefa nanomboka ny maso ivoho izahay dia feno sampan-draharaha manokana. Raha ny marina, ny torohevitra voalohany voaraiko tamin'ny tompona maso ivoho dia ny manampahaizana manokana. Izany dia fanoherana mivantana ny tena antony nanombohako DK New Media - dia satria samy niady ny tetibolan'ny tsirairay avy ary tsy nisy nitady ny mpanjifa. CMO iray dia nandefa antso avy amin'ny mpivarotra mailaka, mpivarotra SEO, mpivarotra media sosialy… tsy lazaina intsony ireo mpivarotra nentim-paharazana. Ary izy rehetra dia nitondra statistika teo amin'ny latabatra hanohanana ny antony tokony handanianao bebe kokoa amin'izy ireo.
Ny paikady marketing dizitaly izay miasa tsara indrindra dia tsy mifampitaha amin'ny, tokony hiara-hiasa izy rehetra. Ireo mpandray mailaka miverina sy miditra ara-tsosialy, media sosialy dia miteraka resadresaka an-tserasera izay miteraka fitanisana sy rohy miverina, izay manatsara ny filaharanao. Avy eo ny laharanao amin'ny teny lakile mifandraika dia manoloana ireo olona mikaroka sy vonona hividy. Ny fanontaniana dia tsy hoe iza no tokony hampiasainao, fa ny fomba tokony hanamarinanao sy hampiasana azy tsirairay avy.
Saika nahazo ahy MDG ianao! Asa tsara.
Tags: MDGdokam-barotra mdgmdgadvertisingSearch Marketingfikarohana mifanohitra amin'ny sosialymarketing ara-tsosialySocial Media Marketing
Sep 11, 2013 amin'ny 4: 30 AM
Amin'ny maha pseudo SEO / SEM ho an'ny orinasa mpivarotra bizina fanombohana, te-hitrandraka roa aho. Ny sosialy sy ny fikarohana dia manodidina, noho izany dia manaiky aho fa tokony hifanome tanana izy ireo amin'ny famolavolana paikady marketing amin'ny fikarohana tsara.